Amboary ny sary misy ny vokan'ny Shadow / Highlight | Famoronana an-tserasera
Firy amintsika no nitranga fa manana sary iray izay tiantsika be isika, nefa tsy tsapantsika fa tavela tamin'ny jiro kely na hazavana kely noho ny tadiavintsika isika? Ny safidy izay eritreretintsika tamin'izany fotoana izany dia, fafao ny sary miaraka amin'ny fangoraham-po satria "mety ho sary tsara", na raha tsara vintana isika ary mahita ny toerana misy antsika amin'ny toe-javatra mitovy manana vintana hafa indray isika haka sary indray, fa maloto kosa ity indray mitoraka ity.
Eny, Aza manahy ary betsaka kokoa raha tsy ianao no iray amin'ireo tsara vintana izay amin'ny safidy faharoa. Amin'ity lesona ity dia hianarantsika momba izany dingana haingana sy tsotra mba hialana amin'ireo antsipiriany ireo izay toa tsy manan-tsafidy afa-tsy ny miverina amin'ny fotoana sy toerana hanaovana sary vaovao.
Vantany vao nosokafana ny sary tany am-boalohany Photoshop, andao mankany amin'ny kiheba Sary - fanitsiana - aloka / fanasongadinana
Eto dia hisokatra ny varavarankely pop-up izay azontsika atao amboary ny mizana maivana sy ny aloka tsy miankina, ary miaraka.
La habetsahana, dia hilaza amintsika jiro na aloka firy tiantsika araka ny sary, halavan'ny taonina manao firesahana amin'ny hamafin'ny inona tadiavintsika io hazavana na aloka io ary arakaraka ny hametrahantsika azy onjam-peo bebe kokoa fantatro hanazava izany fahasamihafana izany jiro sy aloka, fa tsy apetrantsika ny habetsany kely kokoa dia hahatonga azy io ho "maranitra" kokoa.
Ao amin'ny fizarana Fikirana, etsy ambany, hahita safidy roa isika:
Fanitsiana loko - manome anao bebe kokoa na latsaky ny saturation amin'ny sary.
Fanoherana semitone - manome izany mifanohitra ambony na ambany araky ny fanitsiana nataonay teo aloha.
Fikirana amin'ity vokany ity miankina betsaka amin'ny sary izy ireo izay ampiasainay, satria raha misy aloka bebe kokoa sy jiro vitsy kokoa izy dia hampiasa ilay sary voalohany (maka aloka) fotsiny ary ny mifamadika amin'izany. Ary raha manana sary toa antsika isika amin'ity tranga ity, izay ankoatry ny fananana sehatra manana alokaloka betsaka, dia manana sehatra manana jiro be izy, tsy maintsy mahita fifandanjana izy roa. Mba hahatratrarana izany dia ahenantsika mihitsy aza ny fifanoherana halftone.
Farany amin'ity indray mitoraka ity, ho famaranana, ary ambonin'izany rehetra izany mba tsy ho volondavenona loatra ny rahona, dia hilalao isika haavon'ny sary miaraka amin'ny vaovao fanitsiana sosona:
Ity dia fanampiny kely ho an'ireo izay ampirisihina manomeza antsipiriany hatrany amin'ny sarinao. Ao amin'ny varavarankely misy sosona, etsy ambany dia misy bokotra hahazoana miditra haingana amin'ilay safidy Sosona fanitsiana vaovao, any no hisafidianantsika ambaratonga.
Raha vantany vao namboarina araka izay tiantsika ny haavony, nanomboka Tianay ny vokany ho an'ny lanitra fotsiny, mifantina ny ambin'ilay sary izahay (amin'ity tranga ity dia mampiasa ny boribory polygonal afaka mifidy ny lapa), ary mandoko mainty ny sary. Rehefa nampiasa sosona fanitsiana, ny fifantenana amin'ny loko mainty dia manondro fa ao amin'io sehatra io dia tsy te hampihatra ny fanitsiana izahay.
Ary izao no fomba ahafahantsika mamerina amin'ny laoniny ny sary izay tena tianay, amin'ny dingana vitsivitsy, ary amin'ny fahoriana mafy dia nino izahay fa mendrika ny hamafana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Amboary ny sary misy ny vokan'ny Shadow / Highlight
Fandraisana anjara tsara. Tiako izany ary ampian'izy ireo aho. Misaotra Creativos Online.